Real Madrid, Atletico, Juventus & As Monaco – Afarta Kooxood Ee Semi Finalka & Koox Walba Midda Ay Dooneyso Iney Ka Badbaado. - Laacib.net
Real Madrid, Atletico, Juventus & As Monaco – Afarta Kooxood Ee Semi Finalka & Koox Walba Midda Ay Dooneyso Iney Ka Badbaado.
Afar kooxood ayaa isugu soo haray koobka Champions Legue, waana wareega semi finalka tartanka iyadoo koox walba ay maanta xaadir ku noqoneyso Nyon oo ah xarunta xiriirka kubadda cagta UEFA kuna taala dalka Switzerland.
Shabakadd caalamiga ah ee Goal ayaa baaritaan ku sameysay hadba koox walba midda aysan rabin iney ku aado Semi Finalka, waxaana la ogaaday The Old Lady ineysan kala jecleen middii ay ku aadi laheyd kooxaha caasimadda ka wada dhisan halka ay cabsida ugu weyn ka qabto kooxda As Monaco oo heysata da’yarta ugu halista badan yurub.
Inkastoo ay rajeyneyso iney gaarto finalkii labaad oo xiriir ah iyo midkii sadexaad ee afartii sano ee lasoo dhaafay hadana waxaa jira iney qabto cabsi yar oo dhanka isku aadka semi finalka Champions League-ga ah.
Atletico Madrid ma jirto sabab ay uga baqato kooxaha kale balse waxeysan ku farqi doonin Madrid Derby inuu dhaco semi finalka.
Si kastaba Atletico Madrid waxey dooraneysaa iney ka badbaado Real Madrid, sida ay taariikhda qoreyso Atletico marka laga tago kulamada La Liga waa koox aan u babac dhigin Real Mdrid, waxeyna laba jeer ka qaadatay Champions League sadexdii sano ee lasoo dhaafay.
Kadib markii ay si awood leh kaga soo baxday Barcelona, taasoo ah kooxdii laba sano ka hor ku garaacday finalkii Champions League ee ka dhacay Berlin, Juve dhab ahaantii lama filayo iney kooxna ka baqeyso marka la fiiriyo sadexda kooxood ee wareegaan kula sugan.
Juve waxey dooneysaa iney soo afjarto 21-sano oo ay abaar ka heyso tartamada yurub 1996 ayaana ugu dambeysay iney u dabaal dagto Champion League, sidoo kalana afar jeer ayey timid kadib waqtigaas finalka 1997/98/2003 iyo 2015 dhamaan waxaa ka qaaday Dortmund, Barcelona, Milan iyo Real Madrid.
Juventus waxey ka walwalsan tahay Monaco oo ah koox wadata macalin Leanardo Jordim sidoo kalana ay u ciyaaraan da’yarta ugu xirfadda fiican yurub.
Monaco waa koox ka yaabineysa yurub iyo dunida, waana koox raaxo dareemi doonta mid walba oo ay ku aado, balse inyar wuxuu ka walwali doonaa inuu ku aado Juventus oo xili ciyaareedkaan u muuqata kooxda ugu miisaanka culus madama ay dhan walba ka miisaaman tahay.
Kooxda difaacaneysa horyaalka talyaaniga waa koox hab difaaceedkeeda uu aad u adag yahay sidoo kalana gool u diiday 180-daqiiqo weeraryahanada MSN iyo ciyaartoyda Barcelona.
Real Madrid iyadoo ogsoon iney laba jeer tartankaan ka qaaday Atletico Madrid, hadana ma rajeyneyso iney ku aado marka la sameynayo isku aadka maanta.
Los Blancos waxey dareemeysaa ciriiri badan madama wax walba laga filan karo marka Atletico Madrid lala ciyaarayo kulamada minan iyo marti hadana ah koobka yurub.